Ezekieri anooneswa zviratidzo zvaMwari muBhabhironi (1-3)
Chiratidzo chengoro yaJehovha yekudenga (4-28)
Dutu, gore, nemoto (4)
Zvisikwa zvipenyu zvina (5-14)
Mavhiri mana (15-21)
Chinhu chaiita sechakawaridzwa, chaipenya sechando (22-24)
Chigaro cheumambo chaJehovha (25-28)
1 Mugore rechi30, pazuva rechishanu remwedzi wechina, pandakanga ndiri pakati pevanhu vakatapwa,+ pedyo nerwizi rwaKebhari,+ denga rakavhurika ndikatanga kuona zviratidzo zvaMwari. 2 Pazuva rechishanu remwedzi wacho, mugore rechishanu rekutapwa kwaMambo Jehoyakini,+ 3 shoko raJehovha rakauya kuna Ezekieri* mwanakomana wemupristi Bhuzai pedyo nerwizi rwaKebhari munyika yevaKadheya.+ Ruoko rwaJehovha rwakauya paari ari ikoko.+ 4 Pandaiva ndakatarisa, ndakaona dutu rine simba+ richibva kuchamhembe, uye paiva negore guru nemoto waivaima,*+ izvo zvaiva zvakakomberedzwa nechiedza chinopenya, uye pakati pemoto wacho paiva nechimwe chinhu chaiita segoridhe rakasanganiswa nesirivha.+ 5 Mumoto wacho maiva nezvaiita sezvisikwa zvipenyu zvina,+ uye chimwe nechimwe chakanga chakaita semunhu. 6 Chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina nemapapiro mana.+ 7 Tsoka dzazvo dzakanga dzakatwasuka, uye pasi petsoka dzazvo pakanga pakaita sepetsoka dzemhuru, uye dzaipenya sekupenya kwemhangura yakapenyeswa.+ 8 Pasi pemapapiro azvo paiva nemaoko emunhu kumativi ese mana, uye zvese zviri zvina zvaiva nezviso nemapapiro. 9 Mapapiro azvo aigumana. Pazvaifamba, zvaisachinja kwazvakatarisa; chimwe nechimwe chaifamba chakananga mberi.+ 10 Izvi ndizvo zvakanga zvakaita zviso zvazvo: Zvese zviri zvina zvaiva nechiso chemunhu nechiso cheshumba+ kurudyi, nechiso chemukono wemombe+ kuruboshwe, uye chimwe nechimwe chazvo zviri zvina chaiva nechiso+ chegondo.+ 11 Ndizvo zvakanga zvakaita zviso zvazvo. Mapapiro azvo akanga akatambanudzwa ari pamusoro pazvo. Chimwe nechimwe chaiva nemapapiro maviri akanga akagumana, nemapapiro maviri akanga akavhara miviri yazvo.+ 12 Chimwe nechimwe chaifamba chakananga mberi, zvichienda kwese kwazvainzi nemweya zviende.+ Zvaisachinja kwazvakatarisa pazvaifamba. 13 Uye zvisikwa zvacho zvipenyu zvainge zvakaita semazimbe emoto ari kubvira, uye paiva neyaiita kunge mwenje inopenya yaienda mberi ichidzoka shure pakati pezvisikwa zvacho zvipenyu, uye paiva nemheni yaipenya ichibva mumoto wacho.+ 14 Zvisikwa zvacho zvipenyu pazvaienda mberi zvichidzoka, zvaifamba semheni dziri kupenya. 15 Pandainge ndakatarisa zvisikwa zvacho zvipenyu, ndakaona vhiri rimwe chete panyika, riri padivi pechisikwa chipenyu chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina.+ 16 Mavhiri acho aiita seaipenya sedombo rekrisoriti, uye ese ari mana akanga akafanana. Kutaridzika kwawo nekugadzirwa kwawo kwakanga kwakaita sekuti ivhiri riri mukati merimwe vhiri.* 17 Paaifamba, aikwanisa kuenda chero divi pamativi acho mana asina kumbochinja kwaakatarisa. 18 Mavhiri acho ese ari mana aiva nemarimu akanga akakura zvinoshamisa, uye akanga azere nemaziso kumativi ese.+ 19 Pese paifamba zvisikwa zvacho zvipenyu, mavhiri acho aifambawo pamwe chete nazvo, uye zvisikwa zvipenyu zvacho pazvaisimudzwa kubva panyika, mavhiri acho aisimudzwawo.+ 20 Zvaienda kwese kwazvainzi nemweya zviende, kwese kwaiendwa nemweya. Mavhiri acho aisimudzwawo pamwe chete nazvo, nekuti mumavhiri acho maivawo nemweya waishanda pazvisikwa zvipenyu.* 21 Pazvaifamba, iwo aifambawo; uye pazvaimira, iwo aimirawo; uye pazvaisimudzwa kubva panyika, mavhiri acho aisimudzwawo pamwe chete nazvo, nekuti mumavhiri acho maivawo nemweya waishanda pazvisikwa zvipenyu. 22 Nechepamusoro pezvisikwa zvacho zvipenyu paiva nechinhu chaiita sechakawaridzwa, chichipenya sechando chakaoma chinoyevedza uye chainge chakatambanudzwa pamusoro pazvo.+ 23 Mapapiro azvo akanga akati twasu* pasi pechinhu chacho, rimwe richisvika kune rimwe. Chimwe nechimwe chaiva nemapapiro maviri ekuvhara divi rimwe chete remiviri yazvo nemamwe maviri ekuvhara rimwe divi. 24 Pandakanzwa kutinhira kwemapapiro azvo, kwaiita sekutinhira kwemvura zhinji iri kuyerera, kwakafanana nekutinhira kweWemasimbaose.+ Pazvaifamba, zvaiita ruzha serweuto. Pazvaimira, zvaidzikisa mapapiro azvo pasi. 25 Pamusoro pechinhu chacho chakawaridzwa chaiva nechepamusoro pazvo painzwika inzwi. (Pazvaimira, zvaidzikisa mapapiro azvo pasi.) 26 Pamusoro pechinhu ichocho chakawaridzwa, paiva nechimwe chinhu chakaita sedombo resafaya,+ uye chakanga chakafanana nechigaro cheumambo.+ Pachigaro chacho cheumambo chaiva pamusoro, paiva neakanga akagara ipapo uyo akanga akaita semunhu.+ 27 Ndakaona chinhu chaipenya segoridhe rakasanganiswa nesirivha+ chainge chakaita semoto chaitangira maiita kunge muchiuno make zvichikwira; uye kubvira muchiuno make zvichidzika, ndakaona chimwe chinhu chaiita semoto.+ Kumativi ake ese kwaipenya chaizvo 28 semuraraungu+ uri mugore pakunenge kuchinaya mvura zhinji. Ndizvo zvakanga zvakaita kupenya kwechiedza chainge chakapoteredza. Kwakanga kwakaita sekubwinya kwaJehovha.+ Pandakakuona, ndakapfugama, ndikadzikisa musoro wangu, ndikatanga kunzwa inzwi remunhu aitaura.
^ Kureva kuti “Mwari Anosimbisa.”
^ Kana kuti “nemheni.”
^ Zvichida rimwe vhiri racho rakanga rakaita zvekuchinjika pane rimwe.
^ ChiHeb., “nemweya wechisikwa chipenyu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “akatambanudzwa akavhurika.”